Shirka London ma xallin karaa dhibaatada Soomaaliya? - BBC News Somali
10 Maajo 2017
Waxaa magaalada London ka furmay shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya. Kullanka London waxa uu ka dhici doonaa Lancaster House. Waxa si wada jir u shir guddoomin doona Britain, Soomaliya iyo Qaramada Midoobay.
Dokumentiga rasmiga ah ee shirka ayaa waxa xoogga lagu saaray horumarka uu waddanka sameeyey, balse sharraxaada laga bixiyey Soomaaliya waxba iska ma aanay badelin tan iyo wixii ka dambeeyey shirkii shan sano ka hor lagu qabtay London. Waxa lagu sifeeyey Soomaaliya inay tahay waddan ''aad u xasilooni daran iyo mid aanu maamul ka jirin'' halisna ay ku yihiin Mitidiinta Islaamiyiinta ah, Burcad Badeed iyo Macaluul.
Image caption Ciidammada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay u baahanyihiin qalab iyo mishaar joogta ah
Burcadbadeednimadii sanadooyinkii hore ay ku bixi jirtay lacag dhan 5.4 bilyan oo doolar ayaa meesha ka baxday, inkastoo ay jireen falal koobnaa oo dhacay sanadkan horraantiisii. Diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn, xooggaga Amisom, la taliyayaasha 'dhinaca amaanka' ee ka soo jeeda waddamada reer galbeedka, iyo ciidamada Soomaaliya ayaa ka saaray kooxda Al-Shabaab inta badan magaalooyinka waawayn inkastoo haddana kooxdan jihaad doonka ah ay weli gacanta ku hayaan meelo badan, weeraran ay geysan karaan markii ay doonaan.
Ra'iisalwasaaraha soomaaliya oo markab dushiisa kula kulmay wafdi ka socda
Waddanka waxa fara ba'an ku haysa abaar lagau tilmaamay in tahay tii ugu darnayd muddo tobonaan sano ah. Waxa la waayey afar xili roobaad, Qaramada Midoobay-na waxay ku qiyaasaysaa in 275 kun oo caruur ay soo foodsaarayso sanadkan nafaqa darro aad u ba'an.
Carruurta nafaqo darada ay saamaysay waxa la sheegay in sagaal jibaar ay halis ugu jiraan inay u dhintaan cudurada sida jadeecada iyo shuban biyoodka
Image caption Caruurr nafaqa darro ku dhacday oo ku sugan isbitaal ku yaalla magaalada Baydhabo
Wiil yar oo xiran dhar jaala ah ayaa indhihiisa waxay eegayaan darbiga '' Maskaxdiisa ayaa dhaawac soo gaaray, waxaana u sabab ah abaarta daba dheeraatay iyo isagoo waayey nafaqadii uu u baahnaa'' Sidaasi waxa yiri Dr Yussuf Cali oo laba sano ka hor dib ugu laabtay Soomaaliya. Waxa uu ka shaqeyn jiray UK. Waxa uu intaasi raaciyey '' Weligii kama soo kabsan doon''
Koonfurta Galbeed ee Soomaaliya, tobonaan kun oo qof ayaa ku barakacay abaarta. Waxay isugu uruureen goobo si ku meel gaar ah ay u joogaan, waxayna samaysteen guryo ka samaysan cooshash duleedka magaalada Baydhabo. Halkan waxay ahayd hal bowlaha macluushii ka dhacday Soomaaliya 1991- iyo 2011-kii. Waxa loo aqoonsaday in ay noqotay ''Xagashii dhimashada''
Haween badan ayaa ku biiray xogagga ammaanka Soomaaliya
'' Al-Shabaab ayaa ka faa'ideysanaysa wiilashii iyo nimankii aan ka soo tagnay, waxayna siinayaan doolar iyo cunno '' sidaasi waxa tiri haweenay. Waxay intaasi ku dartay '' Nimankeenii iyo wiilasheenii waxa lagu qasbayaa in ay noqdaan mujaahidiin''
''Dhibaatada ugu way ee caqabada ku ah in wax laga qabato abaarta, waa amni darada'' sidaasi waxa yiri Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Sharif Xassan Sheekh Aadan
Image caption Tobanaan kun oo qof oo Soomaali ah ayay barakicsay abaartu
Sharif Xassan ayaa yiri '' Mintidiinta waxa ay xireen dhammaan waddooyinkii looga baxayey magaalada, marka way adagtahay in aan gargaar gaarsiino dadka dhibaataysan
Ergaygii hore ee gaarka ahaa ee Soomaaliya u fadhiyey Maraykanka, Abubakar Armaan ayaa ku tilmaamay kullanka London ''Goob dad wax boobaya ay isugu imanayaan'' waxa uuna intaasi ku daray in ay tahay goob awoodaha shisheeye ay doonayaa in ay ku kala qeyb sadaan Soomaaliya iyagoo eegaya donahooda gaarka ah. Qaar badan oo kunool Soomaliya ayaa u arka shirkan in uu yahay mid dhaqaale uun lagu luminayo, waxayna sheegayaan in loo baahanyahay in lacagta ku baxaysa shirka lagu bixiyo wax ka qabashada abaaraha ka jira dalka
Dhismaha ciidammada qaranka Soomaaliya maxaa hortaagan